Akụkọ - Kedu otu esi ahọrọ igwe ikuku oxygen dịka mkpa anụ ahụ siri dị?
Kedu otu esi ahọrọ igwe ikuku oxygen dabere na mkpa anụ ahụ?
Nlekọta ahụike kwa ụbọchị: 76% nke ndị na-arụ ọrụ na-acha ọcha na-enwe ahụ ike. Ndị mmadụ nwere ike iji ya gụnyere ndị ọrụ na-acha ọcha olu, ndị mmemme, ụmụ nwanyị dị ime, wdg, ezigbo ụlọ ọrụ, ezigbo di, ma nwee ike ịkwadebe onye na-ahụ maka ọrụ na ndị hụrụ ya n'anya na-enye ọkụ ikuku oxygen.
1-2L bụ ụdị nlekọta ahụike. N'iji kwa ụbọchị, mgbe ị na-ekuru oke ikuku oxygen nke ikuku oxygen 1 ma ọ bụ 2L mepụtara wee rute 93%, mkpokọta oxygen dị na alveoli bụ 24-26%. Maka ndị okenye, enweghị ike ịgbanwe ihe mgbaàmà, enwere ike were ya naanị dị ka oxygen oxygen ọbara.
Igwe na-ewepụta ikuku oxygen 5-10L bụkwa nke ụdị nlekọta ahụike +. N'ihi echiche dị ala, yana ihe dị iche iche achọrọ maka gburugburu ebe a na -azụta robot, ike igwe na ihe ndị ọzọ achọrọ, isiokwu a agaghị akọwa ya. E mesịa, m ga -ede edemede pụrụ iche maka otu esi ahọrọ igwe elu ala. , A na -atụ aro ka ị buru ụzọ lebara m anya.
Ọgwụgwọ ahụike: Ndị mmadụ na-arịa ọrịa obi na ọrịa akwara obi, ọrịa obi akwara obi, thrombosis ụbụrụ, ọbara mgbali elu, oyi baa, bronchitis, ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ ọrịa obi akpa ume, ikuku oxygen ogologo oge ga-enwe ezigbo ọgwụgwọ ọgwụgwọ.
N'elu 5L bụ nke ụdị ọgwụgwọ. Mgbe ị kuru ume ikuku oxygen kacha elu nke ihe ikuku oxygen 5 ma ọ bụ 8L mepụtara wee rute 93%, mkpokọta oxygen dị na alveoli bụ 33-41%. Maka onye ọrịa, enwere ike inye oxygen zuru oke. Ọ nwere ike meziwanye mgbochi anụ ahụ zuru oke, hichaa usoro iku ume, ma melite ọrụ nke akụkụ ahụ dị n'ime.
Nkọwa nrugharị: Tinyeghachi ahịrịokwu na ịta oxygen karịa 90%, na ọnụego oke nke onye na -emepụta ikuku oxygen na -ekpebi lita ole.
Mmiri ahụ na -agụnye akụkụ abụọ: ikuku oxygen na -enwe ihe karịrị 90% na oke mmiri.
Ufodu ulo oru ga -eji oke otere ikuku oxygen na -eme ka à ga -asị na ọ bụ ọ̀tụ̀tụ̀ ikuku oxygen na -erugharị iji wee megharịa echiche ahụ. Onye ọ bụla ga -elebara anya iche.
Were 3L oxygen generator dị ka ihe atụ. Hụ ọnụ ọgụgụ dị n'okpuru. Mgbe ị na-agbanwe usoro ahụ ka ọ bụrụ 0.5L-3L, mkpokọta oxygen bụ 93%, nke bụ uru nkịtị. Mgbe agbakwunyere ọnụego ahụ ka ọ bụrụ 4 na 5L, mkpokọta oxygen na-agbadata ngwa ngwa na 82%-78%, nke bụ ụgha ụgha.
Kedu otu esi ekpe ikpe mgbasa ozi na -eduhie eduhie nke azụmahịa ikuku oxygen na -asọba?
Mgbe ịzụrụ igwe na -emepụta oxygen 5L, jụọ onye na -ere ya, ike ikuku oxygen nwere ike iru karịa 90%?
Jiri ngwa nnwale ndị ọzọ iji lelee ezigbo ikuku oxygen. Rụtụ aka na akụrụngwa dị n'okpuru.
Hangzhou Gravitation Medical Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara n'ichepụta na ire nke ikuku oxygen.